दलका घोषणापत्रमा विद्युतीय चुलो
काठमाडौं १२ बैशाख । स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब १८ दिन मात्र बाँकी छ । अधिकांश राजनीतिक दलले आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी नेपा...
केन्ट आरओको नयाँ वर्ष अफर
काठमाडौं २९ चैत । ईओएल प्रालि नेपालमा केन्ट उत्पादनहरूका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक, सि.जी. इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको संस्थाले यसपालीको नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी ग्राहक योजना ल्याएको छ । ...
“सी.जी. स्मार्ट होम, नयाँ वर्षको सुरुवात” स्कीम सार्वजनिक
काठमाडौँ, चैत । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नं. १ इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सी.जी.ले आउँदै गरेको नयाँ वर्ष २०७९ लाई लक्षित गर्दै “सीजी स्मार्ट होम, नयाँ वर्षको सुरुवात” नामक नयाँ वर्षको स्कीम...
जीएम मोडुलरको डिलर सम्मेलन सम्पन्न
काठमाण्डौं, चैत । इलेक्ट्रिकल स्वीच र होम अटोमेसनमा भारतको उत्कृष्ठ कम्पनीहरु मध्ये एक सुपरिचित ब्राण्ड जीएम मोडुलरले नेपालमा पहिलो डिलर साझेदार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गत शुक्रबार सोल्टी होटलम...
स्ट्यान–ली को गोल्डेन स्वीच किन्दा गोल्ड उपहार
काठमाडौ ७ चैत । स्ट्यान–ली को गोल्डेन स्वीच किन्दा गोल्ड उपहार योजना सुरु भएको छ । सुनगाभा ट्रेडिङ्ग प्रालिको स्ट्यान–ली ब्राण्डका गोल्डेन स्वीच किन्दा उपभोक्ताहरु सुन पाउने भएको छ ।&nb...
काठमाण्डौ, माघ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जानकी केबुल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि लाई आफ्नो उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने पुनः अनुमति दिइएको छ । गुणस्तर विभागले तोकिएको गुणस्तर भन्दा कम गुणस...
जाडो मौसममा जीवनस्तर सहज बनाउन ‘सिजी प्रोड्क्ट’
सि.जी ब्राण्ड नेपालको नम्बर एक इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्डको रुपमा परिचित छ । किचनमा आवश्यक पर्ने साना इलेक्ट्रिोनिक सामग्री देखि ठूला उद्योगहरुमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु सि.जीले बजारमा ल्याएको छ । त्यस...
सिजी ब्राण्ड अन्र्तगत ‘सिजिमेरिडिया’ प्रिमियम फ्रिज बजारमा
काठमाडौं, मंसिर । सिजी ब्राण्ड अन्र्तगत सिजिले आफ्नो ‘सिजिमेरिडिया’ प्रिमियम फ्रिज नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नेपाली बजारमा सर्वाधिक लोकप्रियता बटुल्दै आइरहेको यस सिजी कम्पनीले सिजिमेरिड...
इन्डक्सन किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?, यसरी थाहा पाउनुहोस् गुणस्तरीय इन्डक्सन चुल्हो
मंसिर काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा लोडसेडिङ्ग हटेर नेपालमा नै विद्युत उत्पादन बढ्दो छ । बढी उत्पादन भएकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खपत कसरी बढाउने विषय टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।...
काठमाडौँ, २४ असोज । ऊर्जा, सिँञ्चाइ तथा जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतबाट चल्ने चुलोेको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी सुरु गरिएको बताएका छन् । गोदावरी नगरपालिका–१२ ठेच...
काठमाडौंं, असोज । बागमती प्रदेश सरकारले गत चैत १८ गते आह्वान गरेको विद्युतीय बस खरिदका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । बस खरिदका लागि अध्ययन गरी तयार परेको लागत अनुमानभन्दा...
ट्रान्सफर्मरमा स्वदेशी कम्पनीको फड्कोः प्राधिकरणलाई २६ सय ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्न नीकले पायो ठेक्का
काठमाडौं असोज । विदेशमा समेत ट्रान्सफर्मर निर्यात गर्दै आएको स्वदेशी कम्पनी नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक)ले लामो समय पछि ठूलो परिमाणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने ठ...
भन्सार छलेर ७८ लाखका मोबाइल ल्याउदा दुईजना पक्राउ
नवलपुर २२ साउन । भन्सार छलेर जिल्ला भित्र्याउँदै गरेका विभिन्न कम्पनीका रु ७८ लाख मूल्य बराबरका मोबाइल सेट प्रहरीले बरामद गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को...
विद्युत खपत बढाउन सरकारले घटायो विद्युतीय उपकरणको भन्सार महसुल ? हेर्नुहोस् कुन सामग्रीको कति घट्यो
काठमाडौं १७ जेठ। सरकारले विभिन्न घरायसी विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार महसुलमा पनि छुट दिएको छ । यसले विदेशबाट आयात भई यहाँ बिक्री हुने विद्युतीय उपकरणकको मूल्य घट्नेछ । सरकारल...
जिल्लालाई बिजुलीको बल्बमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले बनायो ‘बिजुली घर’
ओखलढुङ्गा, २५ वैशाख । विद्युतको बल्ब उत्पादक उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिका र स्थानीय उद्यमीको सहकार्यमा बल्ब उत्पादनका लागि ग्रामीण बिजुली घर सञ्चालनमा आएको हो । वडा नं ७ बिगुटारमा...